Madaxwaynaha Galmudug oo gaaray Cadaado – Radio Daljir
Seteembar 24, 2017 5:09 g 0
Madaxwaynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee xarunta maamulkiisa, kadib markii uu kasoo dhoofay wadanka Isutagga Imaaraatka Carabta oo muddooyinkan uu joogay.
Madaxwaynaha ayaa waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha xubno ka mid ah baarlamaanka Galmudug, wasiiro iyo dad wayne kalle.
Kahor inta uu soo gaarin magaalada Cadaado ayaa waxaa uu soo maray magaalada Hargaysa ee xarunta Somaliland.
Isagoo warbaahinta la hadlayay ayaa waxaa uu ku eedeeyey madaxda dowladda faderaalka Soomaaliya inay carqaladeeyeen imaatinkiisa.
Madaxwaynaha Galmudug oo taageeray isbahaysiga Sacuudi Carabiya xiisadda Khaliijka, ayaa waxaa siwayn uga horyimid guddoonka baarlamaanka Galmudug iyo madaxwayne kuxigeenkiisa, waxaana ay kusoo beegmaysaa arrintan xilli maamulkiisa laga dhowrayay inuu wax ka qabto adeegyada bulshada deegaamada maamulka oo wali uu san gaarin.